Die Cut Lids mpanamboatra - China Die Cut Lids Factory & mpamatsy
Sarony mofomamy vilany
Takelaka vita amin'ny aluminium
Sarony kapoaka azo ariana
Takelaka lovia eo no ho eo
Sarony kapoaka yaourt
mora rovidrovitra Die Cut Instant Noodles Plastika amin'ny takelaka
Ny takelaka tombo-kase plastika PET dia manolotra faharetana lehibe amin'ny puncture sy ny triatra manampy amin'ny fitazonana ny fiarovana ny vokatra manerana ny rojom-panolorana ary hatrany amin'ny fiafaran'ny mpampiasa izay mora sy azo antoka.
100-150 micro Plastika maty voapaika ho an'ny famehezana poti-ovy
Saika tsy azo roviana
Noho ny polyester orient, ny takelaka vita amin'ny plastika maty dia manindrona be ary mahazaka ranomaso. Ny vokany? Fahafaham-po ny mpanjifa, mazava ho azy! Tsy misy fivoahana, tsy misy fiverenana, ary fiarovana 100% ny atiny. Fanampin'izay, afaka mitsitsy amin'ny kapoty fiarovana ianao satria ny sarony dia ampy tsara.
Dia 72-181mm Fametahana hafanana maty manapaka ny foil aluminium
1.Varina amin'ny plastika avo lenta avo lenta amin'ny sakafo.
2.Lamin'ny atitany mba hampitomboana ny fiainana talantalana.
3. Fiarovana ny sakana amin'ny hamandoana, fofona ary hazavana UV.
4.Glossy ambonin'ny dia toa manintona kokoa.
5.Ampiarahina amin'ny latsa-dranomaso mora misokatra.
6.Fafana ny tombo-kase hamoronana tontolo iainana mahasosotra sy tsy misy dikany.
Easy Peel embossed PET PP Die Cut Lids Ho an'ny paty eo no ho eo
1.Raw fitaovana: PET, PP, horonantsary, adhesives, ink, solvent, sns.
2.Application: yaorta, ronono, fromazy, gilasy, rano, ranom-boankazo, zava-pisotro, kafe, dite, kosmetika, zava-manitra sns.
3.Ny vidiny: isaky ny fitaovana vokatra, habe, loko pirinty & Qty
4.Delivery fotoana: fandefasana haingana, ao anatin'ny 15-30 andro izay miankina amin'ny haben'ny filaminana sy ny famokarana.
Sarina famaohana ho an'ny lovia paty
Ny takelaka vita amin'ny ravin-taratasy vita amin'ny ravina taratasy dia ampiasaina amin'ny kaopy fanidiana misy vokatra kapsily Nespresso tokana (kafe, dite, sns.), Sy ireo vokatra feno fonosana kaopy izay mitaky sakana azo antoka ary fiarovana tsara amin'ny tontolo ivelany. Ao amin'ny tolotra omenay, manana hatevin'ny aliminioma, embossing ary karazana lacquer isan-karazany izahay. Amin'izao fotoana izao, ny lacquer famehezana tsy misy klôro dia nanjary fenitry ny tsena.
Voapaika amin'ny foil PE ny rakotra plastika Ho an'ny kaontenera vokatra sakafo
Mamokatra rakotra plastika PE avo lenta izahay izay tena be mpampiasa amin'ny indostrian'ny sakafo sy ny ronono. Ireo takelaka PE Plastika ireo dia manify amin'ny habe ary ampiasaina ho toy ny sarony vonjimaika ho an'ireo fitoeram-bokatra sakafo azo ampiasaina, ireo fonosana vita amin'ny aluminium rehetra ireo dia mety ho namboarina tamin'ny sary, fampahalalana, logo ary pirinty araka ny fepetra takian'ny mpanjifanay.
Logo vita pirinty vita amin'ny gilasy PE vita amin'ny savony maty mpanapaka
Fampidirana ny takelaka kapoaka PE ny sarony kapoaka PE dia sarimihetsika PE. Izy ireo dia ampiasaina mba hahazoana kalitaon'ny fanontana avo lenta, mora esorina amin'ny fonosana ary tsy rovitra mandritra ny fitaterana sy ny fizarana. Ny fampiasa amin'ny takelaka kapoaka PE ● fangaraharana tsara, fahitana mazava amin'ny vokatra ● Fiarovana aroma sy fiainana mitatra ● Fanidiana mora ● Fanokafana mora sy tsy miova, sarom-baravarana tsy mamiratra , ranomainty, solvent, et ...
Easy Peeling Die nanapaka ny sarom-potaka ovy misy pirinty Rotogravure
Plastika, aliminioma, na taratasy Sarom-potaka ovy voapaika maty. Ny fahaizanay dia karazana sarimihetsika mihena amin'ny refy miaraka amin'ny tombo-kase faran'izay famehezana sy peeling izay ampifanarahana tsirairay arakaraka ny vokatra sy ny mombamomba azy.
Voapaika ny fonosana plastika PET ho an'ny paty eo no ho eo, kaopy yaourt
Vokatry ny vokatra: Azontsika atao ny manamboatra habe sy endrika maherin'ny 100, toy ny mahitsizoro, boribory, toradroa sns.
Fahafahana / fahafaha-manao: 100ml - 4000ml (azo namboarina)
Loko: fanontana miloko 1-10
Logo: Logo an'ny mpanjifa
Famehezana sy fitsaboana: famehezana hafanana
PE PET Plastika maty voapaika ho an'ny tombo-kase kapoaka fitoeran-tsakafo
* Misy hatevin'ny fitaovana namboarina
* Sakana tsara amin'ny harafesina
* Ny takelaka maty amin'ny plastika dia mety amin'ny ambaratonga fanodinana fahadiovana isan-karazany
* Jam & jelly (tantely, nut nougat), fitafiana
* Famonoana paiso mora - fampisehoana tonga lafatra amin'ny tsipika fonosana maro
* Tsara tombo-kase amin'ny alàlan'ny fananana
* Fanoherana avo harafesina
* Azo alaina ho an'ny saron-drakitra maty tapaka rehetra
Miezaka izahay hanome ny mpanjifa vokatra tsara. Fangatahana fampahalalana, santionany & teny nindramina, Mifandraisa aminay!